Munasabad balaaran oo lagu soo bandhigayay wax qabadka wasiirka wasaradda arimaha gudaha oo lagu qabtay Jowhar | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Munasabad balaaran oo lagu soo bandhigayay wax qabadka wasiirka wasaradda arimaha gudaha...
Munasabad balaaran oo lagu soo bandhigayay wax qabadka wasiirka wasaradda arimaha gudaha oo lagu qabtay Jowhar
Munaasabad heerkeedu sareeya lagunna soo bandhigayay buug tusmeynaya howlqabadka wasaradda arimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa laggu soo bandhigay xarunta mamulka ee hirshabelle
Waxaanna munaasabdda goob joog ka ahaa duubabka dhaqanka aqoonyahno ururada bulshada sida dhalinyaro iyo haweenka waxa kaloo madasha u dhamaa masuuliyin ka tirsan labadda golle.
Wasaradda arimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle mudadee afarta sanna ee mamulka deeganka gacanta ku heysay ayaa loo asteeyay iney tahay middii ugu waxqabadka sareysay marka loo eeggo dhaman guullaha muhiimka ah oo ay kasoo hoyisay daadajinta baahinta adeegyada bulsho oo muhiim u ah horumarka iyo tanaadka mamulka hirshabelle.
Qaar kamid ah howlwadeenna ayaa si kooban u qeexay howlaha hortabidnta leh ee wasaraddu hirgilsay ee dhaqan galka noqday.
Nabadoon qaasim qiiley ayaa isna aad u boodiyay dadallada wasaradda arimaha gudaha ee uu horboodayay .
Hogaamiyaasha bulshada sida dhalinyarada iyo haweenka ayaa si isku mid ah u tilmaamay in howadennada iyo hogaanka wasaradda ay si dhab ah ugu daacad adeegen bulshada hirshabelle.
Xildhibaan wabar maxamed iyo wasiirka waxbarashada hirshabelle Cabdullaha abuukar cadow oo ku kalla hadlayay magaca gollaha barlamanka iyo xukumadda ayaa ayagana aad ugu mahadnaqay dadaalkii nafhurnimada howladeenna iyo madaxda wasaradda uu horboodaya wasiir maxamed cali caadle ay ku hirgiliyaan howla badan oo hurumarkooda muuqda.
Wasiirka wasaradda arimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa isna qeexay howlihii adkaa ee hirgalay.
Gunanadkii shacabka duubabka dhaqan iyo madaxda sar-sare ayaa cod sare ku dalbaday in mar kalle wasaradda arimaha gudaha uu daadihiyo wasiir maxamed cali caadle oo ay ku asteeyen masuul howl qabad badan oo ay jecli xoogan ka qaba taabba galka iyo tanadka hirshabelle.
Previous articlekiisaska guud ee cudurka covid19 ee Mareykanka oo garay 11, guddoomiyayaasha gobollada, waxay soo saareen amarro cusub
Next articleSomalia’s intelligence chief worked with an al Qaeda affiliate, so why do we fund him?
Shaqaalaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaliya, shalay iyo maanta Maamulka Hay’addaasi...